बुद्ध सर्किटमा मोनोरेल निर्माण गर्न विदेशी चासो - Naya Patrika
बुद्ध सर्किटमा मोनोरेल निर्माण गर्न विदेशी चासो
बुटवल | साउन २७, २०७५
प्रदेश ५ सरकारले बुद्ध सर्किटमा मोनोरेल सञ्चालनको योजना ल्याएपछि विदेशी कम्पनीले निर्माणका लागि चासो राख्न थालेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमै मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि विदेशी कम्पनीले निर्माणमा चासो राखेका हुन् । अहिलेसम्म तीन विदेशी कम्पनीले बुद्ध सर्किटको अवलोकन गरी सरकारसँग लिखित रूपमै चासो राखेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले ०७५/७६ को बजेटमा पनि तिलौराकोटदेखि लुम्बिनी एयरपोर्ट हुँदै रामग्रामसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्राविधिक र व्यावसायिक रूपमा सम्भावना भएमा संघीय सरकारको समपूरक अनुदानमा निर्माण सुरु गर्ने योजना छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट वक्तव्यमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न प्राचीन कपिलवस्तु विकास आयोजना सञ्चालनार्थ संघीय सरकारसँग समपूरक अनुदानका लागि अनुरोध गर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
तीन कम्पनीको लिखित रूपमै चासो, दुईको स्थलगत अध्ययन
प्रदेश सरकारले मोनोरेल सञ्चालनमा चासो दिएपछि तीन विदेशी कम्पनीले निर्माणका लागि चासो देखाएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । प्रदेश सरकारले गत चैतमा मोनोरेलको विषय बाहिर ल्याएपछि विदेशीले चासो दिन थालेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । निर्माणको चाहना राखेका तीन कम्पनीमध्ये दुईवटाले स्थलगत भ्रमण गरी मौखिक चासो राखेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लोपटक चाइना रेलवे इन्टरनेसनल गु्रपले मोनोरेल सञ्चालन गर्ने भनिएका स्थलको अवलोकन गरेको छ । अवलोकनपछि सो कम्पनीले प्रदेश सरकारसँग कुरासमेत गरेको छ । रामग्रामदेखि तिलौराकोटसम्मको स्थलगत अध्ययनपछि छलफल भएको र थप पछि छलफल गर्ने उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले बताए । मोनोरेल सञ्चालनका लागि चासो दिएका कम्पनीमध्ये एउटाले लिग बनाउन र अर्कोले रेलका मेसिनरी सामान निर्माणमा चासो राखेको श्रेष्ठले बताए । त्यसैगरी, अर्को चिनियाँ कम्पनी सिसिआरसीले पनि स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । सिसिआरसीले रेलका डिब्बा र इन्जिन बनाउँदै आएको छ ।
केन्द्र सरकारसँग सहयोगको आशा
छलफलपछि विदेशी कम्पनीको टुंगो लागेमा लगानीका लागि केन्द्र सरकारमार्फत योजना अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । केन्द्र सरकार ऋण तथा अनुदानमा ग्यारेन्टी बसेपछि काम अगाडि बढ्न सक्ने प्रदेश सरकारका अधिकारीको भनाइ छ । अहिले चासो देखाउने तीनवटै चिनियाँ कम्पनी हुन् । पछिल्लोपटक शुक्रबार छलफल गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे इन्टरनेसनल ग्रुप पहिलेको भन्दा राम्रो देखिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
छलफल अघि बढाउन तीनजनालाई जिम्मा
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले मोनोरेलबारे छलफल गर्न तीन सदस्यीय टोलीलाई जिम्मा दिएका छन् । उनले सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर, निर्माणलगायत विषयमा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिव विष्णुप्रसाद ढकाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव वसन्त अधिकारीसँग छलफल गरी अघि बढ्न चिनियाँ टोलीलाई आग्रह गरेका थिए ।
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधार विकास : मुख्यमन्त्री पोखरेल
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताए । शुक्रबार मुख्यमन्त्री पोखरेल र चाइना रेलवे इन्टरनेसनल ग्रुपका अधिकारीबीच रामग्राम—लुम्बिनी—कपिलवस्तु बुद्धसर्किटमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनबारे छलफल भएको छ । भेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुद्धसर्किटमा पर्यटनको सम्भावना प्रचुर रहेको र प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएकाले काम गर्ने वातावरण तयार भएको बताएका थिए ।
उनले बुद्धसर्किटमा मोनोरेल सञ्चालन गरी पर्यटक बढाउने सरकारको योजना रहेकाले सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर र निर्माणबारे छलफल गरी अघि बढ्न सकिने बताएका थिए । चाइना ओभरसिज गु्रपका नेपाल शाखा महाप्रबन्धक वाङ्ग यु स्वेलगायत पदाधिकारीसहितको टोलीले मुख्यमन्त्रीसँग भेट गरेको थियो ।